यस्तो आयो काभ्रेका तीनै जनाको पीसीआर रिपोर्ट, डाक्टरहरु नै चकित — Imandarmedia.com
यस्तो आयो काभ्रेका तीनै जनाको पीसीआर रिपोर्ट, डाक्टरहरु नै चकित
काभ्रे । र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) किटबाट गरिएको परीक्षणको नतिजा पोजिटिभ देखिएका २ जनाको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । आरडिटी टेस्ट पोजिटिभ देखिएका दुई युवाहरुको स्वावको नमूना संकलन गरी धुलिखेल अस्पतालमा परिक्षण गरिएको थियो। दुवै जना धुलिखेल अस्पतालको आइसोलेसनमा छन्।
कोरोना संक्रमण पुष्टी भएका सनसिटी अपार्टमेन्टबाट धुलिखेल आएका एक व्यक्तिमा पनि कोरोनाको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको स्वास्थ्य कार्यलय काभ्रेका प्रमुख स्वास्थ्य प्रशासक डा. नरेन्द्रकुमार झाले जानकारी दिए।
बेथानचोक –५ का २८ बर्षीय युवा चैत ९ गते भारतबाट स्वदेश फर्किएका थिए। गाउँपालिकामा १० शय्याको क्वारेन्टाइन निर्माण भएपनि उनी होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने भनेका थिए। तर होम क्वारेन्टाइनमा नबसी स्थानीयसंग घुलमिल गरेका थिए। कुनै लक्षण नदेखिएका ती युवाका परिवारका सदस्यमा र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) किटबाट गरिएको कोभिड–१९ परिक्षणको नतिज नेगेटिभ आएको थियो।
यस्तै उपत्यकामा कोभिड-१९ स‌ंक्रमण देखिन थालेपछि नमुना परीक्षण गराउने बढेका छन् । उपत्यकामा मङ्गलबार दुई जनामा संक्रमण देखिएपछि विदेशबाट आएकाहरु आफैँ अस्पतालमा पुगी नमुना परीक्षण गराउन थालेका छन् । उपत्यकामा अहिलेसम्म पाँच जनामा संक्रमण देखिएको छ ।
टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले उपत्यकामा मङ्गलबार एकै पटक दुई जनामा संक्रमण देखिएपछि अस्पतालमा आएर परीक्षण गराउनेको संख्या बढेको बताए । उनका अनुसार, पहिले दैनिक १०-१५ जनाको परीक्षण गर्ने टेकु अस्पतालमा अहिले ३० जना आउने गरेका छन् ।
घरबेटी र समुदायले नै विदेशबाट आएका मानिसलाई संक्रमण भए/नभएको रिपोर्ट ल्याउन भनेपछि ती मानिसहरु अहिले टेकुस्थित अस्पतालमा आफैँ गएर परीक्षण गराइरहेका छन् । ‘उपत्यकामा संक्रमित बढेसँगै त्रास भएको छ । अहिले दैनिक ३० जना आफैँ अस्पतालमा आएर नमुना परीक्षण गराइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘विगत एक-डेढ महिनादेखि विदेशबाट आएका धेरै छन् । घरबेटी र समुदायले नै आफूलाई बस्न दिएन भन्दै धेरै मानिस आउन थालेका छन् ।’
अस्पतालले २४ घण्टामा नमूना परीक्षणको रिपोर्ट दिने गरेको छ । टेकु अस्पतालले सङ्क्रमण देखिन थालेपछि आइसोलेसनको र सघन उपचार कक्षको वृद्धि गरेको छ । अहिले २५ आइसोलेसन र २० सघन उपचारकक्ष तयार गर्ने कार्य भइरहेको अस्पतालका निर्देशक डा. राजभण्डारीले बताए ।
पहिलो पटक माघ ९ गते चीनको वुहानबाट आएका एक विद्यार्थीमा संक्रमण देखिएको थियो भने त्यसयता चैत १० गते फ्रान्सबाट आएकी १९ वर्षीया युवतीमा दोस्रो संक्रमण देखिएको थियो । त्यस्तै चैत १२ गते पुनः एक जनामा कोभिड पोजेटिभ देखिएको थियो भने मंगलबार काठमाडौ‌ंको पेप्सीकोलास्थित सनसिटी अपार्टमेन्टमा बसोबास गरिरहेका ८१ वर्षीय महिला र अर्का ५८ वर्षीय पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो ।
मङ्गलबार संक्रमण देखिएको ललितपुरस्थित पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र अन्य दुई जनाको टेकु अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ । अहिले नेपालमा १६ जनामा संक्रमण देखिएको छ । कैलालीमा चार, कञ्चनपुरमा एक, बागलुङमा दुई, काठमाडौंमा पाँच, पर्सामा तीन र रौतहटमा एक जना संक्रमित फेला परेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले उपत्यकामा नमुना परीक्षणको दायरा बढाइरहेको बताए । उनले मङ्गलबार संक्रमित देखिएका स्थानमा एक हजार सात सयको परीक्षण गरिने जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका अनुसार मङ्गबारसम्म रियल टाइम पोलिमरेज चेन्ज रियाक्सन (पीसीआर) र र्‍यापिड डाइग्नोष्टिक टेस्ट (आरडीटी) गरी दुवै विधिबाट अहिलेसम्म १२ हजार नौ सय छ जनाको परीक्षण गरिएको छ । परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि अहिले उपत्यकामा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकु अस्पताल र वीर अस्पतालमा पनि पीसीआरबाट परीक्षण गरिएको छ ।
इपिडिमोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले उपत्यकामा पनि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विदेशबाट आएका व्यक्तिको परीक्षण गरिरहेको बताए । मंगलबारमात्र उपत्यकामा पीसीआरबाट तीन सय ८७ जनाको परीक्षण गरिएको छ ।